ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ Archives - Page6of 10 - Pissaya News
အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေတယ်။ ခြောက်သွေ့ပြီးယားယံတဲ့အရေပြားအတွက် သံလွင်ဆီက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးချိုးပြီးချင်း သံလွင်ဆီကို လိမ်းပေးထားခြင်းဖြင့် အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေမှာပါ။ ချာမိုမိုင်း အဆီထပ်ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကိုရရှိနိုင်မှာပါ။ ဆံပင် ခြောက်သွေ့ခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်။ ဆံကေသားကောင်းခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်လိုသူအနေနဲ့ ဆံသားအတွက်ရေဓာတ်ရဲ့ အရေးပါပုံကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ရေ ဓာတ်က ဆံပင်တွေကြီးထွားလာအောင် မကူညီပေးနိုင်ပေမယ့် ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အရေးပတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေတာဖြစ် ပါတယ်။ သံလွင်ဆီက ဆံသားခြောက်သွေ့မှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဆံပင်ကို ပိုမိုကြည့်ကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းမလျှော်ခင်မှာ တခေါင်းလုံးကို သံလွင်ဆီရွှဲနေအောင်လိမ်းပြီး နာရီဝက်ခန့်နှပ်ထားလိုက်ပါ။ ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန် သံလွင်ဆီကို အပူပေးပြီးမှ လိမ်းကျံပါ။ လက်အရေပြားကို နူးညံ့စေပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာရရှိနေတဲ့ လက်အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်အများစုဟာ ဈေးကြီးပေးရပြီး ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နိုင်တာကြောင့် သဘာဝပ စ္စည်းဖြစ်တဲ့ သံလွင်ဆီကို အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဟင်းပွဲများပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်စေ၊ ရေချိုးပြီးချိန် ဒါမှမဟုတ် အိပ်ရာဝင်ချိန် မှာဖြစ်စေ အလျင်းသင့်သလို လိမ်းပေးသွားခြင်းဖြင့် အရေပြားကိုနူးညံ့စေပြီး ကျန်းမာတဲ့လက်တစုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းကြေးချွတ်ပစ္စည်းအဖြစ်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ စိုပြေတဲ့နှုတ်ခမ်းသားကို ပိုင်ဆိုင်လိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ matte အမျိုးအစားနှုတ်ခမ်းနီတွေ အဆိုးများတဲ့ အခါမှာ နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့ကွဲအက်ခြင်းကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီနှင့်သကြားကို ရောစပ်ပြီး နှုတ်ခမ်းမှာ သုတ်လိမ်းပေး ထားလိုက်ပါ။ နှုတ်ခမ်းမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အသေကွာကျပြီး နူးညံ့စိုပြေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်သည်း၊ ခြေသည်း အလှအတွက် ဆရာတစ်ပါးပါပဲ။ တပတ်လျှင်တကြိမ်ခြေသည်း၊ လက်သည်းတွေကို သံလွင်ဆီနွေးနွေးထဲမှာ…
ပိန်ချင်သူများ၊ ဝိတ်လျှော့နေသူများ အများဆုံး လုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ ညစာမစားဘဲ နေကြည့်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လယ်စာ ပြီးတော့ ဘာမှမစားတော့ဘဲ ညမှာ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ အိပ်ရာဝင်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နေနိုင်မလဲ? နေ့လယ်စာ ပြီးတာနဲ့ ဘာမှမစားတော့တဲ့အခါ အစာအိမ်မှာ အစာမရှိတဲ့အချိန် ကြာမြင့်သွားတဲ့အပြင် တစ်ညလုံး အက်ဆစ်တွေ ထွက်နေပြီး အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီတော့ ရေရှည်မှာ အစာအိမ်ရောဂါတွေ၊ အစာရေမျိုပြွန်ရောင်ရောဂါေ တွ ဖြစ် လာနိုင်ပါတယ်။ ● အိပ်စက်တဲ့အခါ ဂလူးကို့စ်ဓာတ် ကျဆင်းသွားပြီး မကြာခဏ လန့်နိုးနေတတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ● အဆာခံတဲ့အချိန်ဟာ ကြာမြင့်ပြီး ● မနက်ထိ ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် နုံးခွေပျော့ဖတ်တာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ● ည အဆာခံထားတဲ့အခါ မနက်စာကို အဆီအဆိမ့်တွေ၊ ထမင်းတွေ အများကြီး စားမိစေပါတယ်။ ဒါဆို ညစာကို ဘယ်အချိန်မှာ စားသင့်လဲ? ● ညနေ ၆ နာရီကနေ ၇ နာရီအတွင်း စားသင့်ပါတယ်။ ည ၈ နာရီကျော် ၉ နာရီ၊ ၁၀ နာရီမှ စားတဲ့အခါ ညစာနဲ့ အိပ်ချိန် သိပ်ကပ်သွားတဲ့ အူတွေကို ဝန်ပိစေပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဟာ အချိန် ပိုအလုပ်လုပ်ရတော့ အရေပြားတွေ ညစ်လာပြီး ဝက်ခြံတောင် ထွက်စေပါသတဲ့။ ●…
နေလေး နည်းနည်းပြင်းလာတဲ့အခါ အဆီတွေ တဝင်းဝင်းဖြစ်လာပြီး ကြည့်လို့မလှ အဆင်မပြေဖြစ်ရတဲ့ ပျိုပျိုမေတိုအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ် သဘာဝလည်းကျတဲ့ တိုနာတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ● ပန်းသီးရှာလကာရည် – ပန်းသီးရှာလကာရည် တစ်ဇွန်းကို ရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့ ရောလိုက်ပြီး သမအောင်မွှေနော်။ ပြီးရင် ဂွမ်းလုံးလေးနဲ့ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး အသာတို့ သုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ● ရေနွေးဆူဆူ တစ်ဖန်ခွက်ထဲကို ပူစီနံရွက် လေး၊ ငါး ရွက် ထည့်လိုက်ပါ။ ခဏလောက် အအေးခံလိုက်ပါ။ လုံးဝအေးသွားပြီဆိုရင် အရည်ကို ဂွမ်းလုံးလေးနဲ့ယူပြီး တို့သုတ်ပေးပါ။ ● လက်ဖက်ခြောက်ထုပ်လေး ထည့်ထားတဲ့ လက်ဖက်စိမ်းရေနွေးထဲကို သံပရာရည် လေး၊ ငါး စက်လောက် ညှစ်ထည့်လိုက်ပါ။ အအေးခံပြီး ဂွမ်းလုံးလေးနဲ့ ယူလို့ အသာအယာ တို့သုတ်နိုင်ပါပြီ။ ● သခွားသီး လေး၊ ငါး စိတ်ကို သေးသေးမွှာမွှာလေးတွေ စိတ်ပြီး ရေအေးထဲကို ထည့်ထားပါ။ နှစ်နာရီကနေ လေးနာရီထိ ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပါ။ ပြီးရင် သခွားရေအေးလေးနဲ့ တိုနာ လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ● ရှားစောင်းလက်ပတ် အနှစ်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့ ရောစပ်ပါ။ သမအောင် မွှေပြီးတဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်ကို တို့နိုင်ပါပြီ။ ● ရေခဲရေ၊ ရေခဲတုံး သို့်မဟုတ် ရေခဲရေလေးကို ဂွမ်းနဲ့တို့ပြီး မျက်နှာပေါ်ကို တို့သုတ်ပေးတာဟာ ချွေးပေါက်လေးတွေကို ကျဉ်းသွားစေပြီး အဆီပြန်တာကို အထိုက်အလျောက်…
ဆံသားတွေကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ ဆံပင်တွေမှာ အဆီတွေထွက်နေရင် ပါးတယ်လို့ပိုပြီးထင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းပုံမှန်လျှော်ပါ။ ပျော့ဆေးကို နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာသုံးပါ။ ဆံသားတွေခြောက်သွေ့ပြီး အရောင်မွဲနေရင် ပျော့ဆေးကို ခေါင်းတစ်ခေါင်းလုံးပေါ်ကို မလိမ်းသင့်ပါဘူး။ ပိုပြီးခြောက်သွေ့ တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဆံပင်အဖျားဘက်တွေကိုပဲ ပျော့ဆေးအနည်းငယ်လိမ်းပေးပါ။ ဆံပင်အဖျားတွေကို ပုံမှန်ညှပ်ပေးပါ။ ဆံပင်တွေကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့နဲ့ ကြည့်ကောင်းစေဖို့အတွက် 6-8 ပတ်ကြာရင်တစ်ကြိမ် အဖျားတွေကို တိပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထပ်အထပ်တွေအရမ်းမညှပ်ပါနဲ့။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပါ။ ဆံပင်ကောင်းခြင်းက သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာမူတည်တဲ့အတွက် ဆံသားပါးတဲ့သူတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။ အပူနဲ့အလွန်အကျွံမထိတွေ့ပါစေနဲ့။ ဆံပင်ကို ပူတဲ့အရာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ သတိထားပါ။ အပူများရင် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ခြောက်ခြင်း၊ ပြတ်ခြင်းများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဆံပင်ပေါင်းပေးပါ။ ဆံပင်ပေါင်းဆေးနဲ့ တစ်ပတ်တစ်ခါပေါင်းပေးခြင်းဖြင့် ပျက်စီးနေတဲ့နေရာတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး ဆံသားတွေကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။ Jojoba seed oil, sea buckthorn berry, omega fatty acids, antioxidants, vitamin A, C ပါဝင်တဲ့ ပေါင်းဆေးတွေကို ရွေးချယ်အသုံးပြုပါ။ ဆံသားကျန်းမာစေတဲ့အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသောက်ပါ။ ဆံသားကျန်းမာရေးအတွက် အသားဓာတ်က အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အသားဓာတ်မလုံလောက်ရင် နေစဉ် ကျွတ်သွား တဲ့ဆံသားတွေနေရာမှာ အစားပြန်မပေါက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကြက်သား၊ ဆယ်မွန်ငါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အခွံမာသီး စတဲ့အသားဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကိုစားသုံးပေးပါ။ အခွံမာသီးနဲ့ ဆယ်မွန်ငါးတွေမှာ အသားဓာတ်သာမက ဆံသားအရင်းရှိ မွေးညှင်းပေါက်တွေကို ကျန်းမာစေတဲ့ omega-3…
၁။ အင်ဆူလင်ထိုးတာဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစုက အင်ဆူလင်ကို နောက်ဆုံးအဆင့်၊ ရောဂါမနိုင်တော့မှ ထိုးရတာဆိုပြီး ထင်တတ်၊ကြောက်တတ်ကြတယ်။ ဆီးချိုရော ဂါဆိုတာ ကြာလေလေ ပိုဆိုးလေလေ၊ အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်ဖို့၊ သုံးစွဲဖို့ပိုခက်လေလေ ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အင်ဆူလင်စထိုးပြီးဆိုတာနဲ့ ရောဂါဂိတ်ဆုံးတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ အင်ဆူလင်ဟာ ဆီးချိုအတွက်သုံး တဲ့ဆေးတွေ ထဲက ဆေးတစ်မျိုးပါပဲ။ အင်ဆူလင်ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်လို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ အစောဆုံးသုံးရတဲ့ကုသမှုလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ ၂။ အင်ဆူလင်ထိုးတာမနာပါဘူး။ အခြားဆီးချိုဆေးတွေနဲ့မတူတာက အင်ဆူလင်ကထိုးဆေးဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့အပ်ကြောက်သူတွေက ထိုးဖုိ့မဝံ့မရဲဖြစ် တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အင်ဆူလင်ထိုးတဲ့အပ်ဆိုတာ သေးသေးလေးတွေဖြစ်လို့ ထင်သလောက်မနာပါဘူး။ ကလေးတွေတောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထိုးတတ်ကြတယ်။ (တစ်ချို့အင်ဆူလင်အမျိုးအစားတွေဆိုရင် အပ်တောင်မလိုပဲနဲ့ အသားထဲအင်ဆူလင်ထိုးထည့်ပေး တာမျိုးတောင် ပေါ်နေပါပြီ။) ဒါကြောင့် အင်ဆူလင်စထိုးတဲ့လူတွေမှာ အစပိုင်းမှာနာမယ်ထင်ပြီး ရှုံ့တွနေပြီးမှ မနာမှန်းသိသွားတဲ့ မျက်နှာကိုကြည့်ရတာသိပ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ၃။ အင်ဆူလင်ထိုးရတာသိပ်အလုပ်မရှုပ်ပါဘူး။ အင် ဆူလင်ထိုးဖို့ထုတ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေဟာ အရင်ကထက်စာရင် ပိုပြီးသယ်ရပြုရလွယ်လာပြီ။ အများစုက သယ်ရလွယ်ကူတဲ့ အင်ဆူလင်Penလေးတွေကို သုံးကြတယ်။ တစ်ချို့penတွေမှာဆို အင်ဆူလင်ဖြည့်ပြီးသားတောင် လာတတ်တယ်။ တစ်ချို့က အင်ဆူလင်ထိုးပေးတဲ့စက်ကလေးကို သုံးကြတယ်။ ဒီစက်ကလေးတွေက အင်ဆူလင်ကို ပုံမှန်သူ့အချိန်နဲ့သူ ထိုးပေးမယ့် ပရိုဂရမ်တွေပါတယ်။ အကယ်၍ ပိုထိုးဖို့လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် ထိုးရမယ့်ပမာဏကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး ခလုတ်ကလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ ၄။ အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုဟာ သိသိသာသာကို တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါပြီ။ ၁၉၂၀ Torontoမြို့မှာ အင်ဆူလင်စတီထွင်တုန်းက…
အချို့သော အခြေအနေတွေနဲ့ ဆေးဝါးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရော ဆံသားတွေအပေါ်မှာပါ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါ တယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်နဲ့ ဦးရေပြားကိုပဲ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဆံပင်နဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယုံတမ်းစကားတွေနဲ့ အချက်အလက် အမှန်တွေကို ခွဲခြားပြီး ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ ♦ အဖြူရောင်ဘောက်ဖတ်တွေ ကျနေတာက ကျန်းမာရေးအန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ ဘောက်တွေက မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘောက်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲလို့ ဆိုရင်လည်း သေချာမသိပါဘူး။ သဘော တရား တစ်ခုကတော့ မှိုတွေ အများကြီး ပေါက်ဖွားလာလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်တွေကတော့ အဆီပြန်သော အသားအရေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတု၊ နှင်းခူရောဂါ စတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘောက်ေ တွ က ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်လောက်အောင် ယားယံစေပေမယ့်လည်း အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ ♦ ဘောက်ပျောက်စေဖို့အတွက် သိထားသင့်သော အချက်များ ဆဲလ်သေတွေဖြစ်တဲ့ ဘောက်ဖတ်တွေ နည်းစေဖို့အတွက် ဘောက်ပျောက်ခေါင်းလျှော်ရည်ကို နေ့စဉ် သုံးပေးပါ။ ခေါင်းလျှော် တဲ့အခါမှာ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ခေါင်းမှာ ၅ မိနစ်လောက်ထားပြီးမှ ရေဆေးချပါ။ ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံး ကိုယ်နဲ့ အဆင် အပြေဆုံး ခေါင်းလျှော်ရည် ရရှိဖို့အတွက် ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးစုံကို စမ်းသပ်သုံးကြည့်ဖို့ လိုကောင်း လိုနိုင်ပါတယ်။…
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီး ရုတ်တရက် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို နှလုံးဖောက်တယ်လို့ အရပ်ထဲ အလွယ်တကူ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်မှာ နောက်ထပ် ထပ်မဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အချက်များ ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တူညီမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးကတော့ ဆရာဝန်၊ ဆရာမများနဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါး မှာတော့ ယေဘုယျ ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့အချက်များကို ဖော်ပြသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ • ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ဆေးလိပ်ကို လုံးဝဖြတ်လိုက်ခြင်းက နှလုံးရောဂါ ဆိုးမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ • အစားအသောက် အစားအသောက် ဆင်ခြင်ခြင်းက နှလုံးရောဂါအတွက် ကြီးကြီးမားမား အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ စားသုံးခြင်းက နှလုံးဖောက်ခြင်းကို နှစ်ဆခန့် လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ငါးကြိမ်ခန့် စားပေးသင့်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာဗီတာမင်နဲ့ သတ္တု ဓာတ် တွေ ကြွယ် ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ စားသုံးတဲ့ ဆီပမာဏထက် ဆီအမျိုးအစားက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီများတဲ့ အသားလိပ်မုန့်၊ ဝက်အူချောင်း၊ ထောပတ်၊ ခရင်မ်၊ ချိစ်ခဲ၊ ကိတ်မုန့်၊ ဘီစကစ်မုန့်နဲ့ အုန်းဆီ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာ စတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ မပြည့်ဝဆီများတဲ့ ငါးသလောက်၊ ဆာဒင်း၊ ဆယ်လ်မွန် စတဲ့ ငါးများ၊ ထောပတ်သီး၊ အစေ့အဆံများ၊ နေကြာစေ့နဲ့ သံလွင်ဆီများ ဟာ…
နေကြာစေ့သည် ပရိုတင်းကြွယ်ဝသည်ဆိုသော်လည်း အခွံ များက သွားကိုဒုက္ခပေးနိုင်သည်။ ခံတွင်းအနံ့ကောင်းစေရန် စားသုံးသော ပီကေနှင့် Mint များ သည် ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းပေ။ အချို့ Mint သည်သကြားဓာတ်ပါဝင်ပြီး ဗက်တီးရီးယားများ ပေါက်ပွားရန် အားပေး သည်။ သကြားမပါသော Mint များ စားနိုင်သည်။ သစ်သီးခြောက်များသည် ဗီတာမင်နှင့် အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝ သော်လည်း စေးကပ်မှုကြောင့် သကြားနှင့် အက်စစ်ဓာတ်များကို သွားပေါ်ချန်ထားခဲ့နိုင်သည်။ ဗက်တီးရီးယားများ အကြိုက်တွေ့ပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေး ပြဿနာရှိနိုင်သည်။ ရေခဲတုံးလေးများကို ဝါးစားခြင်းသည်လည်း သွားကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်သည်။ ရေခဲနှင့် သွား၏အပေါ်ယံလွှာတွင် ကြွေဓာတ်ပါဝင်ပြီး ကြွပ်ဆတ်သဖြင့် အပေါ်ယံကြွေပဲ့ပါက သွားကိုဒုက္ခပေး မည်ဖြစ်သည်။ အချိုရည်များကိုလည်း သောက်သုံးခြင်းမှ ရှောင်သင့်သည်။ သကြားအပြင် စီးထရစ်အက်စစ်ပါ ပါဝင်ပြီး သွားအပေါ်ယံကြွေ လွှာကို တိုက်ခိုက်ရာမှ အခေါင်းပေါက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အားကစားလုပ်ပြီး သောက်သော အားဖြည့်အချိုရည်များ သည်လည်း အလားတူ သကြားဓာတ် အများအပြားပါဝင်သဖြင့် ရှောင်ရှားသင့်ကာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းအတွက် ရိုးရိုးရေသာ ပြန်ဖြည့်သင့်သည်။ credit-7 day news
ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကြွေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ သားညီက ရိုက်ကူးထားပြီး အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေ မနေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ ရဲအောင်၊ လွှမ်းပိုင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိချောပို၊ ခန့်စည်သူ၊ ထွန်းထွန်း၊ ဗေလုဝ နဲ့ တိုင်ရွန် တို့က ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ကြွေရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဘ၀ကို ပုံဖော်ရိုက်ကူထားတာတွေ့ရပြီး လူငယ် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် လွှမ်းပိုင်ရဲ့  ပရိသတ်တွေနဲ့ သရုပ်ဆောင် အိချောပိုရဲ့ ပရိသတ်တွေ အများဆုံး အားပေးကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ရုံမတင်ခင်ကတည်းက ဇာတ်ကားပိုစတာမှာတင် ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်တစားအားပေးခြင်းကို ခံထားရတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိသောအချက်များကို လျစ်လျှူရှူထားခြင်း သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များခြင်း စတာတွေကိုမသိဘူးဆိုရင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုပြီးပျက်စီးစေ ပါတယ်။ ပြဿနာကတော့ နှလုံးရုတ်တရက်ရပ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်မှရောဂါရှိမှန်းသိပြီးတော့ ဒီအချိန် မှာအသိနောက်ကျနေ ပါပြီ။ ဒါကြောင့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သော အစားအစာများ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို အမြဲစားသုံးနေရင် (သို့) အလွန်အကျွံစားမယ်ဆိုရင်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုပိုပြီးလျှင်မြန် စေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကယ်လိုရီတွေလျှော့ချဖို့နဲ့ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝဖို့အတွက် သဘာဝအတိုင်းရတဲ့ သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်း ရွက်၊ ကောက်ပဲသီးနှံတွေနဲ့ အသားတွေကိုစားသောက်ပါ။ ဆား၊ သကြားနဲ့ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ အသင့်လုပ်အစား အစာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ 3. အိပ်စက်ချိန်နည်းပါးခြင်း နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မပျော်ရင် (သို့) အိပ်ချိန်မလုံလောက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ပြီးပြည့် စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အိပ်စက်ခြင်းကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းက ဦးနှောက်ကိုအတွေးအမြင်သစ်တွေ ရရှိအောင်အားပေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်တွေကိုလည်း ပြန်လည်အားဖြည့်စေပါတယ်။ အိပ်ချိန်မလုံလောက်ရင် ကိုယ်အလေးချိန် တက်ခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု တစ်ခါတစ်လေတော့ စိတ်ဖိစီးမှုက အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ရဲ့တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့adrenaline ဟော်မုန်းတွေပိုထွက်လာစေပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနဲ့ နှလုံးအောင့်ခြင်း တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ဖိစီးမှုခံစားရတာကြာလာရင်တော့ ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရစေနိုင်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း ထိုင်နေခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားမှုနည်းပြီး ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားပွဲမှာထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူဆိုရင် မကြာခဏထရပ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုပြုခြင်း၊ လမ်းထလျှောက်ခြင်းတွေပြု လုပ်ပါ။…